Cómo escuchar música အခမဲ့ con Google Assistant y Nest
Los altavoces inteligentes Nest audio y Nest Mini (anteriormente también llamados Google Home y Google Home Mini) han conquistadoamuchos usuarios graciasala sencillez y precisión con la Que el Asistente que ofrece Google da respuestaatodas nuestras dudas y la gran flexibilidad que ofrece အတွက် el control de dispositivos domóticos. Los altavoces de Google también ofrecen un excelente rendimiento de sonido, que podemos utilizar para escuchar música relajante o de fondo cuando escribimos, cuando hacemos Las tareas del hogar o cuando organizamos una ပါတီ salvaje.
Pero, ¿qué servicio de transmisión de música usar para escuchar música desde los altavoces inteligentes de Google? En esta guía intentaremos responderaesta interesante pregunta mostrándote ဂူဂဲလ်လက်ထောက်နှင့်အတူဂီတကိုအခမဲ့ဘယ်လိုနားဆင်ရမလဲလစဉ်ကြေးပေးဆောင်စရာမလိုပဲ
အဖတ်ကိုလည်း: Google၊ Alexa နှင့် Siri (အသံအမိန့်များ) မှတေးသီချင်းများကိုမည်သို့နားထောင်ရမည်နည်း။
Para escuchar música en streaming con comandos de voz primero tendremos que conectar el Nest Mini o Nest Audio que ofrece Googleanuestra red Wi-Fi, luego configurar los န်ဆောင်မှုများ de streaming que se utilizarán desde la aplicación Google Home, disponible gratis para အန်းဒရွိုက် နှင့် iPhone ကို / iPad. Si aún no hemos conectado el altavoz de Googleanuestra red, te recomendamos que leas la guía Google Home (Nest) လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာ - အသံလက်ထောက်၊ ဂီတနှင့်အိမ်အလိုအလျောက်.
အခမဲ့တေးဂီတကိုနားထောင်ရန် YouTube ဂီတကိုပြင်ဆင်ပါ
Para asegurarse de haber activado YouTube Music como un servicio de reproducción de música, abra la aplicación Google ပင်မစာမျက်နှာ en nuestro smartphone o tablet, nos registramos con la misma အကောင့် de Google que usamos para configurar los altavoces, pulsamos el icono de nuestra cuenta en la parte superior derecha, pulsamos Wizard ဆက်တင်များကဒ်သွားကြည့်ရအောင် န်ဆောင်မှုများ နောက်ဆုံးတော့ကိုနှိပ်ပါ ဂီတ.
ထဲမှာ pantalla que se abre, asegúrese de que haya una marca de verificación junto al elemento Youtube Music; အကယ်၍ ၎င်းကိုမရွေးပါက၎င်းကိုချက်ချင်းဖွင့်ရန်သင့်အသံကိုနှိပ်ပါ။ သီချင်းတစ်ပုဒ်၊ သီချင်းစာရင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ပြောစရာရှိသည် Google ကဟေး စပီကာနား ကပ်၍ သီချင်း၊ အနုပညာရှင်သို့မဟုတ်ဖွင့်ရန်စာရင်းရှိသည်။
အခမဲ့သီချင်းများနားထောင်ရန် Spotify ကိုပြင်ဆင်ပါ
Con el Asistente de Google también podemos utilizar el servicio que ofrece Spotify para escuchar música gratis desde los altavoces Nest; No es necesario ရှိ una suscripción activaaSpotify Premium, ya que Google Home también es compatible con el အခမဲ့ Spotify ဝန်ဆောင်မှု (con inserción de anuncios y límites en el número de canciones que se pueden cambiar). Para activar Spotify en el Asistente de Google ni siquiera tendremos que descargar la aplicación dedicada, simplemente abriremos la aplicación Google Home en nuestro teléfono, abriremos el menú en la parte superior derecha (icono de cuenta) y nos lleva de regresoala ruta. Wizard ကိုချိန်ညှိချက်များ -> ဝန်ဆောင်မှုများ -> တေးဂီတ။ ဖန်သားပြင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် element ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ Spotifyအသံကိုကျွန်ုပ်တို့နှိပ်ကြသည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အကောင့်.
Se abrirá una ventana que nos preguntará si queremos ဖန်တီး una အသစ်က cuenta de Spotify basada en la cuenta de Google o iniciar sesión con una cuenta de Spotify existente; en este último caso se abrirá una nueva ventana de inicio de sesión desde la cual podremos ingresar el usuario y contraseña de la cuenta de Spotify o usar una de las teclas de acceso rápido en la parte superior. Si ya tenemos instalada la aplicación Spotify en nuestro smartphone, después de presionar လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အကောင့် Spotify အပလီကေးရှင်းသည်တိုက်ရိုက်ဖွင့်ပြီးဂူဂဲလ် Assistant တွင်လည်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောအကောင့်ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးတွင်၊ Spotify ၀ န်ဆောင်မှုကိုဖန်သားပြင်ရှိရွေးချယ်နိုင်သောသူများထဲသို့ထည့်ပါလိမ့်မည် ဂီတအဲဒါကိုသုံးဖို့ငါတို့လုပ်သမျှအကုန် (Spotify item) ဘေးမှာ check mark ကိုထည့်ပါ Tus servicios de música) ။ သီချင်းဖွင့်ရန်ပြောပါ Google ကဟေး စပီကာနောက်တွင်သီချင်း၊ အနုပညာရှင်၊ ဖွင့်ရန်စာရင်းသို့မဟုတ်တေးသီချင်းအမျိုးအစားတို့ပါရှိသည်။
လူကြိုက်အများဆုံး streaming ၀ န်ဆောင်မှုများအပြင်သင့်ကိုယ်ပိုင်သီချင်းနားထောင်ရန် Google Nest စပီကာကိုသုံးနိုင်သည် estación de ရေဒီယို အကြိုက်ဆုံးကိုသုံးခြင်း TuneIn ကကမ်းလှမ်းဝန်ဆောင်မှု (Google Assistant အတွက်အထူး ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်ပေါင်းစပ်ထားသည်)
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့် app ကိုမဆိုတပ်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆိုထည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။ streaming ရေဒီယိုကိုနားထောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ပြောရပါလိမ့်မည်။ Google ကဟေး နောက်တွင် ရေဒီယို 105 ကို Tunein ပေါ်တွင်တင်ပါ; obviamente podemos reproducir မည်သည့် radio italiana disponible en TuneIn simplemente cambiando el nombre del comando de voz visto hace un rato. Para သိ todas las radios que se transmitenatravés de TuneIn, lea la información contenida en el sitio web oficial de la radio italiana TuneIn.
ရေဒီယိုမှဂီတကိုနားထောင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အထူးနှစ်သက်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်များကိုဖတ်ရှုရန်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါသည် ဘယ်လိုနားထောင်ရမလဲ အခမဲ့အွန်လိုင်းရေဒီယို PC များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်မှာ mi အကောင်းဆုံး applications များ para escuchar radio FM y transmitir música en Android y iPhone.
streaming ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သော YouTube Music, Spotify Free နှင့် TuneIn ရေဒီယိုတို့ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည် ယူရိုတစ်ခုတည်းမကုန်ဘဲဂီတကိုအခမဲ့နားထောင်ပါ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းနှင့်ဂီတခိုးကူးမှုအပေါ်မှီခိုခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း (ဤကိစ္စတွင်လုံးဝအသုံးမကျ) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကြော်ငြာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ချန်လှပ်ထားနိုင်သောသီချင်းအရေအတွက်အပေါ်ကန့်သတ်ချက်များကဲ့သို့အချို့သောကန့်သတ်ချက်များအပြင်ထပ်တိုးဂီတကိုအခမဲ့ပေးသည်။ ဤကန့်သတ်ချက်များသည်တင်းကျပ်လွန်းသည်ဟုထင်ရပြီးကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်လွတ်လပ်စွာနားထောင်လိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်များကိုဖတ်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည် တေးဂီတကိုအကန့်အသတ်မရှိနားထောင်ရန်နှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် Spotify Premium ၏ကောင်းကျိုးများ mi Youtube ဂီတဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် PC နှင့်စမတ်ဖုန်းမှ app သာရှိဂီတ.
Amazon Alexa နဲ့စပီကာတွေရှိပါသလား။ ဤကိစ္စတွင်လည်း streaming ဂီတကိုအခမဲ့နားထောင်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်တွင်ဖော်ပြထားသောဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံးနိုင်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်အက်ခိုးမှတဆင့် Alexa နှင့်အခမဲ့သီချင်းများကိုမည်သို့နားထောင်ရမည်နည်း.